CALADIUM: KORRIIN IYO DARYEELKA GURIGA, SHARAXAADDA IYO SAWIRADA NOOCYADA - SOOSAARKA DALAGGA
Nolol fiican gurigaaga - ubaxa ee kubada
Quruxda geedkan qallafsan iyo quruxda badani waxay xaq u leedahay dhammaan dadaallada la xariira daryeelka isaga.
Dhibaatooyinkan oo badan, maxaa yeelay waxay u baahan tahay taxadar illaa iyo sanadka oo dhan, inkasta oo kaliya ay quruxdeeda quruxdeeda dhawr bilood ah ku faraxsan tahay.
Qof deggan degaannada kulaalayaasha ee Koonfurta Ameerika, Waxa uu si aad ah u doortay shuruudihiisa. Waxay ka tirsan tahay qoysaska aroorka dabiiciga ahna kuma jiraan wax ka badan 15 nooc. Dhaqanka waxaa lagu soo koobay in ka badan 1000 nooc.
Tilmaamaha guud ee ubaxa gudaha
Caladium waa warshad leh caleemo waaweyn oo aad u qurux badan oo ah midabada kala duwan. Qaab dhismeedka, waxay u eg yihiin wadnaha ama xargaha, waxaa laga yaabaa in sababta ay u leedahay magac kale. "Wadnaha Ciise".
Caleemaha caleenta ah waxay yeelan karaan midab labanlaab ah. Midabada aasaasiga ahi waa buluug, jaalle, cadaan, casaan iyo cagaaran, waxay ku xiran tahay noocyada kala duwan.
Warshadu ma laha asaas, koritaanka caleen waa xididka.
Muuqaal ka mid ah waa taas Caleemaha waxay ka koraan kaliya guga dabayaaqada ilaa xagaaga dambe. Kadibna way qallalaan, wayna dhintaan, geedka waxay gashaa waqti dheer oo qadhaadh ah ilaa Maarso.
Sawirku wuxuu muujinayaa aragtida "Kaldomolor":
Caleemaheeda ayaa leh midab laba-laab ah - xarun cas oo ka soo horjeeda dabiiciga cagaaran
Sawirada nooca "Caladium Esculentum":
Si aad ah uga duwan noocyada kale ee dhererka caws caleen. Waxay ku koraan ilaa 100 cm waxayna leeyihiin caleemo waaweyn ilaa 80 cm.
Sawirku wuxuu muujinayaa "Caladium Violacecum":
Xawaaruhu wax yar oo qafiif ah oo caleemo ah oo caleemo ah leh qaybta hoose ee midabka cas ama lilac.
Sawirka muuqaalka "Caladium Hybrid":
Fasalkaan, ku dhowaad warqad caddaan ah ayaa lagu duubay xididdada guduudan, iyo cagaar cagaaran ayaa u muuqda in la daadiyo.
Daryeelka ubaxa waxay u baahan tahay joogto ah, laakiin waxay sidoo kale bixisaa qurux badan bilaha xagaaga.
Gadashada Caladium wuxuu ku fiican yahay qaab tuber, halkaas oo aad si dhaqso ah u arki kartid dhibaatooyinka, haddii ay jirto. On waa in aysan jirin dhar, waxyeello iyo jilicsanaan.
Haddii ubax diyaar ah loo qaato, mid waa inuu dareenkiisa ku taxluqo oo keliya marka uu jirayo ama maqnaanshaha cudurrada, laakiin sidoo kale carrada dheriga.
Hadday boodboodeygeedka noocaas ah Maqnaansho qaadashada. Haddii wax waliba ay u socoto, markaa uma baahnid inaad dib u soo celiso ka dib iibsashada. Wuxuu kaliya u baahan yahay daryeel, sida caadiga ah ee muddada koritaanka
Gubashada Kaladium ee looga hortago dhamaadka caleemaha koritaanka ayaa iska dhacaya. Waa lagama maarmaan in laga saaro dheriga oo aanay bilaabin in leexo.
Marka Caladium koro, waxay u baahan tahay waraabin badan. Waraabinta waa in ay ahaato sida ugu dhakhsaha badan lakabka ugu sareeya ee ciidda qoyaan. Waraabinta waa la yareynayaa marka qalabka la joojiyo. Xilliga jiilaalka, digriiga ku haray dhulka, waxoogaa yar qoyan, si aysan u qalajin.
Waa muhiim! Biyaha Kaladi waa inay noqdaan biyo diiran oo la kariyey.
Beerto waxay ku bilaabataa biqilka ee tuber. Si arrintan loo sameeyo, waxaad ku shubtaa ciid qoryo iyo meel tuubo dusha sare ah. Si loo yareeyo burooyinkeeda, waxay ahayd lagama maarmaan in ay lahaato iftiin iyo diirimaad qolka, aan ka yarayn 22 darajo. Caanaha waa inay noqdaan kuwo engegan oo nadiif ah.
Ka dib markii biqilka, tuber waxaa lagu beeray dheri. Cabbirka tuberku caadi ahaan waa 5 cm, taas oo macnaheedu yahay dheriga waa inuu ahaadaa ugu yaraan 10-15 cm dhexroor.
Qeybta hoose waxay ka buuxsameysaa lakab oo dheecaan ah, ka dibna ciid qalafsan iyo badh dhulka dhulka ku wanaagsan.
Qalab kale ayaa lagu shubay - iyadoo buurta, dalool waxaa laga sameeyaa gudaha, kaas oo tuber la dhigo kelyaha ilaa kor, si badh ka mid ah ay ku taallo dusha sare. Laga soo bilaabo kor, waxaa la daboolay qeybtii labaad ee dhulka la kariyey.
2-3 dhalinyaro yar yar waxaa lagu beeray dherar leh dhexroor 10 cm, 15 cm - 3-5. Tuberka la beeray waxaa loo waraabiyaa si dhexdhexaad ah si looga fogaado qulqulka.
Marka sprouts ugu horeysay u muuqdaan, waxaad ku wareejin kartaa geedka qoto dheer.
Waa muhiim! Iyada oo la beero qoto dheer, dhirta ku siinayaa caleemo waaweyn, iyo qulqulaya - tiro badan.
Aqoonsi loo baahan yahay sannad walba ka hor dhirta ka tago gobolka hurdada. Si arrintan loo sameeyo, digriiga waxaa laga saaraa dherigii ay jiilaalka, si fiican u nadiifin oo loo baaro waxyeelada. Kadibna waa la kala soocaa oo waxaa la dhigaa substrate cusub oo la mid ah sida inta lagu jiro beerashada.
Qodobka ugu caansan ee ciidda cawska waa caleen iyo humus, ciid iyo peat, dhammaan qaybaha siman. Wuxuu jecel yahay ciidda acidic.
Waa lagama maarmaan in la quudiyo geedka 1 jeer saddex wiig xilliga gu'ga iyo dayrta, marka ay jirto koritaanka firfircoon ee caleemaha. Bacriminta waa in ay ku jiraan potassium, fosfooraska iyo nitrogen.
Kordhinta warshad laga bilaabo abuurku ma siin karo sifooyinka guud (caleenta caleen) taas oo ay ku tarmaan. Haddii aad dib-u-pollinate dhirta, laba bilood waxaad ka heli kartaa abuurka.
Waa in lagu beeray isla markiiba goosashada. Isku daridda biqilka waa inay ka kooban tahay ciidda caleen iyo ciid 4: 1 saamiga qaabka. Waxaa lagama maarmaan ah in la qoto dheeraado abuur farabadan. Cirku wuxuu u baahan yahay inuu si fiican u miiro.
Wixii germinating abuurka u baahan tahay heerkul sare - min 25 ilaa 30 darajo. Heerkulka sare, si dhakhso ah caleemaha ayaa kici doona.
Foosto ayaa lagu dabooli karaa filim ama dhalo iyo marar badan oo hawo leh. Waraabinta oo kaliya laga sameeyo sprayer.
Caleemaha ayaa soo baxaya 15-20 maalmood. Isku day laba jeer. Digriiga ugu dambeyntii sameeyay by dayrta.
Baahida loo baahan yahay in la sameeyo horraanta gu'gamarka digriiga laga soo qaato dheriyada jiilaalka. Digriiga yar yar ee carruurta ayaa kala gooni ah. Waxaad kala qaybin kartaa tuberka qaangaarka ah. Waxaa la googooyaa mindi jeermiska dila ah si qayb kasta ay u leedahay kalyo.
Cuts ayaa lagu rusheeyaa qoryo la jajabiyey ama dhuxul firfircoon oo loo qoondeeyay dhowr maalmood si ay u qalalaan. Kadibna qayb kasta waa la beeray dhar gooni ah.
Goobta kubadda cagta ee kubada cagta, Caladium waxay u baahan tahay heerkul heer sare.
Heerkulka ugu hooseeya waa in aysan hoos udhicin 20 darajo. Dhirta xasaasiga ah iyo qoraalka - waxay bilaabi kartaa inay lumiso caleemo.
Waa muhiim! Xilliga jiilaalka, digriiga waxaa lagu kaydiyaa heerkul ah 16-18 digrii.
Si loo ilaaliyo qurxinta ee caleemaha, ubaxa wuxuu u baahan yahay iftiin wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, iftiinka waa in la kala saaraa. Meesha ugu fiicnaanta guriga ayaa noqon karta bari ama galbeed.
Yareynta qoyaanka aan la qaadan karin qolka aagga geedka shisheeye ku nool yahay ka hooseeya 70%. Si aad uhesho heerkan, biyaha la kala soocay waxaa lagu buufin karaa ubaxa, ka ilaalinta xiriirka caleemaha sida ugu macquulsan. Waxaad dheriga ku dhejin kartaa weelka qashinka qoyan.
Samee sheyga casiirka sunta ahSidaa daraadeed, waxaa lagama maarmaan ah in laga fogaado caruurta iyo sidoo kale in gacmaha lagu gacmo galiyo iyagoo daryeelaya. Dadka degaanka ee dhulkan ka mid ah ayaa isticmaala digriiga cuntada, taas oo ah sababta ay u leedahay magaca "geedka rootiga la cuni karo".
Caladium waa u nugul yihiin cudurada fangas, sida dabaylo goor dambe ah, kalluun bakteeriyadeed, oo saameeya tuberka. Si looga hortago dhibaatooyinkan, u baahan tahay in la hagaajiyo habka waraabinta.
Cayayaanka in dhirta ay ku xanuunsan karto waa aphid, caarada caarada iyo mealybugs. Waxaad u baahan tahay inaad la dagaallantid caawimaad cayayaanka.
Haddii shuruucda daryeelka iyo dayactirka ee ubaxa la arkay, wuxuu abaalmarin doonaa kabaha quruxda badan ee caleemo qurux aan caadi ahayn iyo xarrago.